सरकारको कूटनीतिक कमजोरीले कोरोना खोप आएन : सांसद देव - Dainik Online Dainik Online
सरकारको कूटनीतिक कमजोरीले कोरोना खोप आएन : सांसद देव
प्रकाशित मिति : २३ असार २०७८, बुधबार २ : ५७
नेपाली कांग्रेसका राष्ट्रियसभा सदस्य जितेन्द्र नारायण देवले सरकारको कुटनीतिक कमजोरीका कारण नेपालमा कोभिड विरुद्धको खोप आउन नसकेको आरोप लगाउनुभएको छ।
राष्ट्रियसभाको बुधबार बसेको बैठकको विशेष समयमा बोल्दै उहाँले राष्ट्रियसभासदस्य नेपाल सरकार खोप ल्याउने कुरामा सम्पुर्ण रुपमा असफल भएको दाबी गर्नुभएको हो।
अपरिपक्क कुटनीतिका कारण सरकारका सबै कुटनीतिक प्रयासहरु असफल भएको टिप्पणी उहाँले गर्नुभयो।
दक्षिण एशियाको सन्र्दभमा अमेरिका सरकारको सहजीकरणमा २५ लाख डोज बंगलादेशलाई उपलब्ध भएको र सोही परिमाणमा पाकिस्तानलाई पनि उपलब्ध भएको, भुटानलाई डेनमार्क सरकारले कोभ्याक्स स्किम अन्र्तगत २५ लाख डोज भ्याक्सिन पठाउने कुरा भईरहेको तथा श्रीलंकामा पनि अमेरिकी सरकारको संयोजकतामा खोप उपलब्ध गराउने काम भएको उदाहरण दिदै उहाँले “सरकार किन फेल भयो ?” भनी प्रश्न गर्नुभयो।
उहाँले भन्नुभयो “नेपाल सरकार खोप ल्याउने कुरामा सम्पुर्ण रुपमा फेल भएको स्थिति छ । कुटनीतिक प्रयासहरु फेल भएकोे छ । यो कसरी भयो किन फेल भयो? ती देश र ती कम्पनीहरु संगको नेपालको सम्बन्ध किन चिसो भयो? नेपालको सरकारसंग किन डिल गर्न चाहेनन्। दक्षिण एशियाका ४ वटा देशहरुले ल्याउन सफल भए नेपालले ल्याउन सकेन। यो कुरा महसुस गर्ने कि नगर्ने? यति कुरा भन्दैमा हामीलाई कुनै जनावरहरुसंग तुलना नगरियोस् । यो मेरो प्रश्न हो । फेल भएको हो कि होइन सरकार ? यो महसुस गर्ने कि नगर्ने?”
राष्ट्रियसभाकी सदस्य कोमल ओलीलाई इंकित गर्दै उहाँले खोप किन आउन सकेन भनेर आफुले देखेका सामान्य कुरा भन्दै गर्दा कुनै जनावरसंग तुलना नगर्न पनि आग्रह गर्नुभयो । ओलीले राष्ट्रियसभा सोमबारको बैठकमा सरकार विरोधी गठबन्धनलाई बाँदरको संज्ञा दिदै व्यंग्य कविता बाचन गर्नुभएको थियो।
कमिसन एजेण्टहरुको घेराउमा सरकार
उहाँले वर्तमान सरकार कमिसन एजेण्टहरुको घेराउमा परेको दाबी पनि गर्नुभयो । उहाँले कमिसनमा कुरा नमिलेका कारण कोभिडशिल्ड खोप आउन नसकेको दाबी गर्नुभयो।
कमिसन एजेण्डले पैसा नपाएको कारणले कोभिडशिल्ड खोप नआएको दाबी गर्नुभयो।
उहाँले भन्नुभयो “कोभिडसिल्डको १० लाख डोज खोप नआउनुको पछाडि पुर्व स्वास्थ्यमन्त्री हृदेश त्रिपाठीले भनिसक्नुभएको छ कमिसनको खेलको कारण। कमिसन एजेण्डहरुले अहिलेको सरकारलाई घेरिराखेको छ । मेरो आरोप त्यो छ।”
उहाँले सरकारको गलत नीतिका कारण परराष्ट्रमन्त्रालयले काम गर्न र त्यही कारणले डिप्लोमेटिक डिलिङ फेलियर भएको जिकिर गर्नुभयो।
उहाँले भन्नुभयो “परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पंगु बनाईएको छ। अहिलेको सरकारले परराष्ट्र मन्त्रीलाई पंगु बनाएको छ । कार्यकर्तालाई भर्ति गर्ने केन्द्र बनाएको छ।
डिप्लोमेसीको डि नजान्नेले पोलिटिकल लिडरसिप लिएको छ। सरकारको गलत नीतिका कारण परराष्ट्रमन्त्रालयले काम गर्न सकिरहेको छैन। त्यही कारणले डिप्लोमेटिक डिलिङ कम्पिट फेल भएको छ। कुटनीतिक फेलियरका कारण हामीले खोप ल्याउन सकिरहेका छैनौ। यसलाई रियलाईज गर्न सरकार तयार छ कि छैन? सरकारले आफ्नो फेलियरलाई लुकाउनका लागि सम्मानित संस्था राष्ट्रपतिको संस्थालाई चिठी लेखाउने हो? म त यसलाई चाइल्डलिस्ट डिप्लोमेसी भन्छु । बच्काना कुटनीतिक मुभ भन्छु यसलाई । गल्ती गरेको छ नेपाल सरकारले रियलाईज गर्ने कि नगर्ने ? राष्ट्रपतिबाट खोप ल्याउने सन्र्दभमा चिठी लेखाउने कामै गर्नुहुदैनथ्यो । गर्नै हुदैनथ्यो । मेरो च्यालेञ्ज छ।”
राष्ट्रियसभा सदस्य देवले कुटनीतिक असफलताका कारण नेपालले अन्तराष्ट्रिय विश्वसनियता गुमाईसकेको र अन्तत एउटा देशसंगको सम्बन्धमा गएर सिमित भएको दाबी गर्नुभयो।
परराष्ट्रमन्त्री र प्रधानमन्त्रीको तहबाट देशका कार्यकारी प्रमुखलाई चिठी लेख्न सकिनेमा त्यसो हुन नसकेको बताउनुभयो।
उहाँले भन्नुभयो “हाम्रा परम्परागत मित्रहरु चीन भारत, अमेरिका, जापान लगायतका जर्मनी फ्रान्स जस्ता देशहरु र हाम्रो रिलेसन कोल्ड भयो। नेपाली कांग्रेसको कन्सन्ट त्यो हो । सम्बन्धलाई बनाउन , मिठास बनाउ प्रोएक्टिभ बनाउन मुलुकले धेरै मेहनत गर्नुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेकाले एउटा देशमा मात्रै सिमित हुनु परेको छ।”
उहाँले बैदेशिक नीतिको संञ्चालन कच्चा ढंगले गरेकाले नेपाल अहिले एउटा देशसंगको सम्बन्धमा गएर सिमित भएको दाबी गर्नुभयो।
उहाँले कोरोना महामारी विश्वव्यापी समस्या भएको भन्दै नेपाली कांग्रेसले रोकथाम, नियन्त्रण लगायत कार्यमा सहयोग गर्न सधै तयार रहेको बताउदै आएपनि सरकारले प्रतिपक्षी दलहरुसंग कहिलेही सहयोग नमागेको गुनासो गर्नुभयो।